Umzobo weFIFA ulapha-iGeofumadas
Umzobo weFIFA ufikile
NgoDisemba, 2009 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Usuku olulindelekileyo lwafika, ntombazana Ummeli kaMtyholi wayengumboniso opheleleyo, nangona abaninzi bethu bezibuza kwakhona ukuba ngumdwebo okanye ikhalenda.
Ibhola yenye yezinto ezinjalo ezingaqhelekanga, ezikhanga nakakhulukazi abazondayo umdlalo wendawo kodwa bavezwe yiNdebe yeHlabathi ... nangona kuyenzeka ukugqithisa kakhulu.
Ndakufumanisa nzima ukufumana unxibelelwano, kudala Akazange akhulume ngaye; apha itafile kunye nam elindelwe malunga nezixhobo zendalo:
EMzantsi Afrika Mekhsikho, Uruguay neFransi
Imbi iMexico, kuba ixhomekeke kumphathi. I-Uruguay khange ibe ligorha mva nje kodwa ziintshatsheli zehlabathi, kwaye nangona iFrance yayivuthela ekugqibeleni, basengamandla ombane ngaphandle kokuba bayintloko yeqela ngeli xesha.
Argentina, ENigeria, kwiRiphabhliki yaseKorea naseGrisi
Inzuzo yokuba yinhloko yeqela, inceba yokuba i-Argentina ihamba kakubi kwi-tie.
ENgilani, EU.SA, Algeria, Slovenia
Ewe, kakuhle, oku kubonakala ngathi "kuza u-Oscar wam uncwadi oneminyaka embalwa ndiqinisekile ukuba ndibhala incwadi enkulu"
EJamani, e-Australia, eSerbia naseGhana
I-Netherlands, iDenmark, iJapan kunye neCameroon
Kuvakala ngathi umdlalo we-nintendo, iiVikings, kunye nezizwe zaseAfrika kunye neenqwelo zeemfazwe zehlabathi ezisezantsi.
EItali, Paraguay, ENew Zealand neSlovakia
Duro iItali, kodwa kukho amathuba, ukuba baqhubeka bexakekile kwintambo.
Brasil, Korea DPR, eCôte d'Ivoire kunye Photshugo Njengokuba kufuneka ukhale njengoLula ukuze ube nethamsanqa huh. Masibone ukuba iPortugal iyalifumana inqanaba layo.
España, ESwitzerland, Honduras y Chile
Yiya apha apha kunye iimvakalelo, iSwitzerland ehluphekileyo ukuba siyambamba elambile. Usizi, babini kuphela kwabathathu abapasileyo. ISpain iyithatha kakuhle, nangona ezopolitiko ziya kuphazanyiswa ngumongameli we-European Union.
Kodwa ungakhathazeki, ayifuni kuze kube seentsuku ze-188.
Post edlulileyo«Ngaphambilini SEXTANTE, + i-220 imizila ye-gvSIG
Post Next Amanqanaba omgangatho kunye ne-GIS eninziOkulandelayo »
Impendulo kwi "Umzobo weFIFA ufikile"
Injalo ke iNdebe yeHlabathi… Lumka namaqela ase-Afrika !! .. Hayi kuba beza kuba ngabona bantu basekuhlaleni, kodwa kuba kwiminyaka yakutshanje bakhule kakhulu ngokwebhola.
Malunga nelizwe lam (iArgentina)… andiboni ukuba eli qela limiselwe… kodwa ngubani owaziyo, banobuchule kangangokuba banokudlala kakuhle ngaphandle komqeqeshi! Ndiyamhlonipha uMaradona, njengomdlali, kodwa njengegcisa , Sele ebonakalisile ukuba ayisiyonto yakhe ngokwaneleyo ngaphambi kokuthatha iqela lesizwe. EArgentina, uMaradona ufana notatomkhulu: akukho mntu unobuganga bokumxelela ukuba wenza ikaka! ...